Maalinta: Febraayo 13, 2020
“Aqoon-isweydaarsiga Baaskiilka” oo ay soo qabanqaabisay Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul ayaa isu keenay wakiillo waaxeedyo, aqoonyahanno, ururada baaskiillada, kooxaha dalxiiska iyo ardayda ka socota gobollo badan. “Qorshaha Mootada Bajaaj ee Istanbul” iyo Naqshadaynta Wadooyinka Baaskiilka [More ...]
Dhibcaha Bandhigga Ganacsiga ee Magaalada Istembaal 2019 waa la daabacay. Marka loo eego, marinnada tareenka ee Istanbul waxay qaadeen 844 duulimaad oo ay wataan 153 baabuur bishii Diseembar waxayna qaadeen 495 milyan 65 kun oo rakaab ah. Turkey ayaa ugu weyn [More ...]
Sarkaalka Gaadiidka-Sen, inkasta oo xaqiiqda ah in magdhowga Mashiinka Mashiinka, kaas oo loo beddelay faa'iido ku jirta heshiiskii Wadajirka ee la sameeyay 2017, waxaa bixisay Macaamiisha kale ee TCDD, sababtuna waa in T thatVASAŞ uusan bixin magdhawga 2018-ka bilood ee 2019 iyo 24. [More ...]
Hüseyin Keskin, Agaasinka Guud ee Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka (DHM Chairman) iyo Gudoomiyaha Gudiga, ayaa shaaca ka qaaday in adeeg bilaash ah oo culeyska jirka ah oo ah 0-6 uu ka billowday gegada diyaaradaha ee Istanbul. Ku saabsan mowduuca, maamulaha guud ee Keskin [More ...]
Darawalada basaska ayaa u mahadceliyay Madaxweyne Zorluoğlu, oo subaxnimadii la kulmay iyaga oo si shaqsi ah ugu deeqay. Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee Dowlada Hoose Magaalada Trabzon Mustafa Kurtuluş, TULAŞ A.Ş. Arif, Maareeyaha Guud [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay nadiifinaysaa meelaha dadku maraan iyo kuwa xad-dhaafka ah ee ay isticmaalaan dadka lugeynaya, gaar ahaan jidadka ku teedsan halbowlayaasha waaweyn, wadooyinka iyo wadooyinka sababo la xiriira barafka ka da'o Magaalada. Suuxinta Magaalada [More ...]
Isgoysyada buundada ee Isbitaalka Magaalada Gaziantep iyo Maamulka Guud ee Wadooyinka Waaweyn ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha si looga hortago ciriiriga taraafikada ee agagaarka Isbitaalka Magaalada Gaziantep, oo ay wado Wasaaradda Caafimaadka. [More ...]
Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara-Sivas Kayaş-Elmada In Qeybta Kaabayaasha Bixinta Kaabayaasha Dhismaha Dhismaha Dhibacaha Ankara-Sivas Sare oo leh qiime ku dhow TL 2020 ee Maamulka Waddooyinka Tareenka ee Waddanka Turkiga (TCDD) [More ...]
Si loo taageero horumarinta warshadaha nidaamka tareenka ee dalkeena iyo horumarka shaqsiyeed ee Injineerada ka howl gala waaxyada nidaamka tareenka ee Ururka Rail Systems Association (RSD), gaar ahaan Ankara, Istanbul iyo Eskişehir. [More ...]
Muwaadinku wuxuu isku dayi doonaa in codka la maqlo isagoo mudaaharaadaya in Xarunta Tareenka Taarikhiga ah uusan shaqeyn doonin. Xarunta Tareenka Tareenka ee Taariikhda ee Kartepe, oo u dhaxaysa Köseköy iyo Pamukova oo ay maamusho Agaasimaha Guud ee Shirkadaha Tareenka Waddooyinka [More ...]
Coronavirus, oo ka bilaabatay Shiinaha oo ka walaacsan adduunka oo dhan, ayaa sidoo kale si qoto dheer u saameeyay dhaqaalaha. In kasta oo shirkado badani joojiyeen wax soo saarkii Shiinaha, moobiilkii Mobile World Congress ayaa la kansalay. Joojinta shirweynaha ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay qorshooyinka TOGG. [More ...]
TÜVASAŞ waxay sii wadaysaa inay ka shaqeyso naqshaddii ugu horreysay ee Tareenka Qaranka iyo Guryaha Korantada Korantada, waxayna isu diyaarineysaa inay soo saarto Milli Tren tas-hiilaad maxalli ah. tareen korontada qaranka soo saaray TÜVASAŞ, laakiin waxaa loogu talagalay sida aluminium lixaad qaba [More ...]
Wadooyinka lagu daboolay dhoobada inta lagu gudajiro howlaha ka socda goobta Akyazı ee Wadada Waqooyiga Marmara waxaa nadiifiya Dowlada Hoose ee Akyazı Wadada Marmara, oo dhex mari doonta Degmada Akyaz Ak ee Sakarya; Cusmaanbey waxay ku socotaa wadada ugu weyn sababta oo ah shaqooyinkeeda qaybta ka gudbaysa degmada Eskibedil. [More ...]
Ku dhawaad ​​20 oo Shaqooyin oo ka socda Qubrus iyo Fanaaniintii Abaalmarinta la siiyay ee Turkiga ayaa ka dhici doona Madxafka "Günsel Art Museum", oo la furi doono 700ka Febraayo, Nicosia Derebo, oo ah Maalinta Dhiirrigelinta GÜNSEL. Dalkeena gude iyo qaran ahaanba [More ...]